Kule mihla, ngokuphuculwa kwetekhnoloji kunye nemigangatho yokuphila, abantu bahlawula ngakumbi nangakumbi impilo yabo. Ke baninzi abahlobo abavela kwicandelo lamashishini ahlukeneyo, banethemba elikhulu malunga nomzi mveliso wamayeza kwaye bafuna ukutyala imali kumzi mveliso wamayeza, ngethemba lokwenza ...
Mnu. Inkulumbuso yase Tanzania Ityelele i-IVEN Pharmatech IV Solution Turnkey Project
Namhlanje, sonwabile kakhulu ukuba uMnu. Nkulumbuso waseTanzania utyelele iprojekti yesisombululo se-IV efakwe yi-IVEN Pharmatech eDar es Salam. Umnumzana Nkulumbuso uzise iminqweno emihle kwiqela le-IVEN kunye nomthengi wethu kunye nomzi mveliso wabo. Okwangoku, wayincoma kakhulu i-Iven's qua ephezulu ...
I-Ampoule-Ukusuka kumgangatho ofanayo ukuya kwiiNketho zoMgangatho oCwangcisiweyo Ityhubhu yokuqokelela igazi luhlobo lwesiporho seglasi esinefuthe elinokubonisa ukuqokelelwa kwegazi kunye neemfuno ...
Njani malunga neephakheji zeengxowa ze-PVC ezingekho phantsi kweSisombululo se-IV?
I-Ampoule-Ukusuka kumGangatho obuCwangcisiweyo ukuya kwiiNketho zoMgangatho oCwangcisiweyo ezingezizo ze-PVC zebhegi ethambileyo yesisombululo semveliso ithatha indawo yeebhotile zeglasi, iibhotile zeplastiki kunye nePVC ifilimu infusions enkulu, ephucula kakhulu umgangatho ...
I-Ampoule-Ukusuka kumgangatho ofanayo ukuya kuKhetho oluCwangcisiweyo loMgangatho
I-Ampoule-Ukusuka kumgangatho ofanayo ukuya kuKhetho loMgangatho oCwangcisiweyo Ii-Ampoules zezona zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo izisombululo zokupakisha kwilizwe jikelele. Zizibhotile ezincinci ezitywiniweyo ezisetyenziselwa ukugcina iisampulu kokubini kulwelo kunye nokuqina ...
Imigca yethu yokuqokelela ityhubhu yegazi ithengisa kakhulu kwihlabathi liphela
Ngokubanzi, ukuphela konyaka kuhlala lixesha elixakekileyo, kwaye zonke iinkampani zingxamela ukuthumela iinqwelo ngaphambi kokuphela konyaka ukunika impumelelo kunyaka ka-2019. Inkampani yethu ayisiyonto ikhethekileyo, kwezi ntsuku amalungiselelo okuhambisa nayo igcwele. Kanye ekupheleni ...
Zithini iimpawu ezithile zeshishini lezixhobo zamayeza eTshayina kweli nqanaba?
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nophuhliso olukhawulezayo lweshishini lokuxuba amayeza, ishishini lezixhobo zamayeza likwakhokelele kwithuba elifanelekileyo lophuhliso. Iqela elikhokelayo kwiinkampani zezixhobo zamayeza zihlakulela nzulu kwimarike yasekhaya, ngelixa ...
Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca,